Doorashooyinka Somaliland oo bilowday & gobolka Sanaag oo aan hal meela laga codayn maanta (Dhegayso) – Radio Daljir
Doorashooyinka Somaliland oo bilowday & gobolka Sanaag oo aan hal meela laga codayn maanta (Dhegayso)
Nofeembar 28, 2012 4:30 b 0
Radio Daljir, Nov 28, Doorashooyinka golayaasha deegaanka ee maamulka Somaliland ayaa saaka ka bilowday goboladda maamulka Somaliland ka taliyo, sida gobolka, Awdal, Waqooyi Galbeed, Togdheer iyo gobolka Sool oo codbixintu ka dhacday magaaladda Laascaanood oo keliya.
Codbixintu waxay meelahaasi saaka uga bilaabatay si nabadgelyo ah, waxaana codbixintu saaka ugu horbilaabatay magaalada Hargeysa iyadoo codkii u horeeyey uu dhiibtey M/weynaha maamulka Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud ?(Siilaanyo) iyo xubno ka tirsan golihiisa Wasiiradda.
Gobolka Sanaag oo maalmihii u danbeeyey ay ka taagnaayeen xiisado la xiriira codaynta doorashada golayaasha deegaanka ee maamulka Somaliland ayaanay saaka guud ahaanba ma dhici doorashadu marka laga reebo magaaladda Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag iyo deegaanada Galbeedka kagaga aadan magaaladaasi.
Degmooyinka, Badhan, Yubbe, Xiingalool, DHahar iyo dhamaan tuulooyinka hoostaga goboladda Hayland iyo Sanaag bari ayaysan saaka ka dhcin wax doorasho ah iyadoo deegaanadaasi ay ku xayndaaban yihiin ciidamo ka tirsan kuwa Daraawiishta Puntland oo halkaasi gaadh ka haya ?Doorashooyinka Somaliland.
Mukhtaar Maxamed Cali oo ah Wariye madaxbanaan kuna sugna degmada Hadaaftimo ee gobolka Sanaag oo waramay Radio Daljir ayaa sheegay in saaka guud ahaanba gobolka aysan ka dhicin wax doorasho ah.
Wuxuu sheegay in degmada Yubbe oo hoostagta magaaladda Ceerigaabo ay saaka tageen wafti ka socda S/land oo uu hogaaminayey Wasiirka Gaashaan dhiga Somaliland, Hase haatee wuxuu sheegay waftigaasi in guud ahaanba dib looga celiyey magaaladda Yubbe.
Sidoo kale Doorashooyinka Somaliland ayaan ka dhicin gobolka Sool, marka laga tago degmadda Laascaanood ee xarunta gobolka Sool halkaaso noqotay xarunta keliya ee ay maanta ka dhacdo Doorashadda Somaliland, goboladda Sool, Sanaag bari iyo Cayn.
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Puntland oo eedayn ujeediyey S/land.
Caawa iyo Daljir, Nov 27-12, Axmed Nuur Ibraahim (Somali) _Daljir Boosaaso.